Tora 5 Yemahara Mwedzi yeApple Music kuburikidza Shazam | IPhone nhau
Apple payakatanga kuzvipira kwayo kutenderera mumhanzi muna 2015, yaive ichipa kune vese vashandisi 3 mwedzi mahara kuitira kuti vakwanise kuyera mabhenefiti ebasa ravo avo vasina kana chinhu chekugodora kuSpotify (maererano nekatalog) uye zvakare inosanganiswa muIOS. Apple yakapa ichi chikumbiro pazvinodzokororwa chete kune vatsva vatsva.
Nezuro manheru Super Bowl yakaitwa, chimwe chezviitiko zvakakosha zvemitambo muUnited States, chiitiko icho vashambadzi vanobhadhara mamirioni mazhinji kushambadza. Chimwe cheshambadziro chakaratidzwa chaive che Squarespaceakazivisa ichiperekedzwa nenziyo yaDolly Parton 5 kusvika 9 (vhezheni itsva ye9 kusvika ku5).
.@Shazam # 5to9 panguva dzanhasi #SuperBowl kuvhura chakakosha kushamisika! Iwe unogona zvakare kusimuka kusvika pamwedzi mishanu ye @AppleMusic yemahara kana iwe uri mutsva kunyorera ❤️ https://t.co/Vj5KuzZ0xo pic.twitter.com/8g0oiDpQuW
Sekureva kwaDolly Parton kuburikidza neTwitter, vese vashandisi vanoshandisa Shazam kuziva rwiyo urwu, vanogona kuvhura chakashamisa chakakosha. Asi pamusoro pezvo, zvakare yakatendera vashandisi vatsva nakidzwa nemwedzi mishanu isina Apple Music.
Zviripachena, chiitiko ichi chatopfuura uye nhoroondo yaDolly Parton haisi yekuti ine zvakawanda zvinokanganisa pasirese, zvirinani nhasi. Neraki, kuburikidza Iyi link tinogona kunakidzwa nemwedzi mishanu yeApple Music mahara. Iyi sarudzo zvakare inowanikwa mune Shazam marongero sarudzo.
Ichi chinopihwa chinongowanikwa chete Kusvika Kurume 31st uye inogona kubvumidzwa kubva kuArmenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Brazil, Chile, Denmark, Egypt, France, Germany, India, Indonesia, Israel, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Malaysia, Mekisiko, Moldova, Holland, Nigeria, Norway, Philippines, Poland, South Korea, Romania, Russia, Saudi Arabia, Singapore, Slovenia, South Africa, España, Sri Lanka, Sweden, Switzerland, Thailand, Turkey, United Kingdom, Ukraine, United Arab Emirates, Canada uye United States
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Kutengesa » Tora mwedzi mishanu yemahara yeApple Music kuburikidza naShazam
Kutenda neruzivo, asi mwedzi miviri mahara
Google ichave iri kufunga nezve yakajeka mutemo yakafanana neApple's
Facebook yakashandisa "kunyepa" humbowo kushoropodza anti-kuteedzera matanho muIOS 14